တရုတ် Fiat က Android ကား DVD, Fiat Linea အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Fiat က Android 5.1 ကား DVD စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:Fiat က Android ကား DVD,Fiat Linea အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Fiat က Android 5.1 ကား DVD,Fiat က Android 4.4 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fiat က Android ကား DVD
Fiat က Android ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Fiat က Android ကား DVD, Fiat Linea အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Fiat က Android 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Fiat Fiorino Citroen Nemo ကားခေါင်းစီးများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
9 '' Fiat 500X 2014-2020 အတွက် Android ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat DOBLO 2016-2018 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Ducato အတွက် Android9ကားစတီရီယို 2008-2015  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat 500X 2014-2019 အတွက် Android 9.0 ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat 500x 2019 အတွက် Android ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
UNO 2014-2017 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
UNO များအတွက် Android ကို9ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Duster 2014-2016 Deckless များအတွက် Android ကိုဗဟုသုတဖျော်ဖြေခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Doblo များအတွက် Android မှာ 8.0 အော်တိုရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
JUKE 2004-2016 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးမီဒီယာပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြက်တူရွေးဘလူးတုသ်နှင့်အတူ DOBLO 2016 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် Fiat Doblo 2010-2014 သည်မာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Egea 2016 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Linea 2014-2015 7.1 စနစ်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1 Fiat Linea ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Fiorino အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Bravo မော်တော်ကားပေး Audio ကို Android 7.1.1 စနစ်က  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Doblo 2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Fiorino Citroen Nemo ကားခေါင်းစီးများ
Fiat Fiorino Citroen Nemo ကားခေါင်းစီးများ ဒီယူနစ် Fiat Fiorino ကား၏ခေါင်းစီးတပ်ဆင်ထားတဲ့ Android 10 စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ချောမွေ့။ တုံ့ပြန်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့်ထောင်နှင့်ချီသောအက်ပ်များကိုတေးဂီတမှဂိမ်းသို့ကူးယူနိုင်သည်၊...
9 '' Fiat 500X 2014-2020 အတွက် Android ကားအသံ
Klyde Fiat 500X အတွက် ၉ လက်မ Android Car Radio PX6 64GB အင်္ဂါရပ်များ မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android9စနစ် CPU: ROCKCHIP PX6 (3399)၊ Cotex A72 + A53,6 Core အဓိကကြိမ်နှုန်း: Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) RAM: 4GB DDR3 Nand Flash: 32GB...
Fiat DOBLO 2016-2018 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Fiat DOBLO 2016-2018 အတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာ Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM - Samsung...
Fiat Ducato အတွက် Android9ကားစတီရီယို 2008-2015
Fiat Ducato အတွက် Android9ကားစတီရီယို 2008-2015 Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
Fiat 500X 2014-2019 အတွက် Android 9.0 ကားရေဒီယို
Fiat 500x 2019 အတွက် Android ကားစတီရီယို
UNO 2014-2017 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
UNO များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်းမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားမျက်နှာပြင် 2014-2017 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ: - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - UNO 2014-2017 မော်ဒယ် 1. ကို Android 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း။...
UNO များအတွက် Android ကို9ကားတစ်စီးရေဒီယို
UNO 2014-2017 များအတွက်နယူးမော်ဒယ်မှာ Android 9.0 9inch ကားစတီရီယို UNO 2014-2017 များအတွက် 1.9 လက်မအပြည့်အဝထိကားကိုရေဒီယို UNO 2014-2017 များအတွက် DSP ကားတစ်စီးဗီဒီယိုမှာ built 2.Android 9.0 PX5 octa-core UNO 2014-2017 များအတွက် Android ကိုအော်တို...
Duster 2014-2016 Deckless များအတွက် Android ကိုဗဟုသုတဖျော်ဖြေခြင်း
Duster 2014-2016 Deckless များအတွက် Android ကိုဗဟုသုတဖျော်ဖြေခြင်း Duster Deckless အန်းဒရွိုက်9Pie, ပိုကောင်း fluency, compatibility နှင့် privacy နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက်စနစ် Android ကိုဗဟုသုတဖျော်ဖြေခြင်း။ သငျသညျအမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်နှင့်...
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား Doblo 2016 ဘို့ 1.Oreo 8.0 ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား - - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ: 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2....
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို
Doblo 2016 ဘို့ Oreo 8.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို Doblo 2016 ဘို့ 1.Oreo 8.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို - - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ: 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2. Doblo 2016 ဏအဘို့ဤ...
Doblo များအတွက် Android မှာ 8.0 အော်တိုရေဒီယို
Dobol ဘို့ဟာ android 8.0 အော်တိုရေဒီယို 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ: - လူတစ်ဦးချင်းပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - Doblo များအတွက် 1Android 8.0 အော်တိုရေဒီယို။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2. Doblo အဘို့ဤ Android 8.0...
JUKE 2004-2016 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးမီဒီယာပလေယာ
JUKE 2004-2016 များအတွက် Android မှာ 8.0 ကားတစ်စီးမီဒီယာပလေယာ ကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်းသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်သို့ထိရောက်မှုနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှစ်ဦးစလုံးကိုရောက်စေဖို့အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်တပ်ဆင်ရန်ဒီလွယ်ကူသော JUKE 2016...
ကြက်တူရွေးဘလူးတုသ်နှင့်အတူ DOBLO 2016 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ်
ကြက်တူရွေးဘလူးတုသ်နှင့်အတူ DOBLO 2016 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ် ဤသည် DOBLO 2016 ကားတစ်စီးခေါင်းကိုယူနစ်တစ်ခု FHD ကားတစ်စီး DVR နှင့်နောက်ဘက်အမြင်ယာဉ်ရပ်နားကင်မရာတို့ပါဝင်သည်နှစ်ခုကင်မရာများ '' တပ်ဆင်ထားလာပါတယ်။...
အန်းဒရွိုက် Fiat Doblo 2010-2014 သည်မာလ်တီမီဒီယာစနစ်
အန်းဒရွိုက် Fiat Doblo 2010-2014 သည်မာလ်တီမီဒီယာစနစ် android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Android ကို Fiat Doblo 2010-2014 သည် 1.Multimedia စနစ်, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Fiat Egea 2016 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Fiat Egea 2016 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို 1.Fiat Egea ဟာ android နှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် 2016 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Fiat Linea 2014-2015 7.1 စနစ်ကားကို DVD Player ကို
Fiat Linea 2014-2015 7.1 စနစ်ကားကို DVD Player ကို 1.Fiat Linea 2014-2015 7.1 စနစ်ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
အန်းဒရွိုက် 7.1 Fiat Linea ကားကို DVD Player ကို
အန်းဒရွိုက် 7.1 Fiat Linea ကားကို DVD Player ကို 1.Android 7.1 Fiat Linea ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Fiat Fiorino အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Fiat Bravo မော်တော်ကားပေး Audio ကို Android 7.1.1 စနစ်က android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် 1.Fiat Bravo မော်တော်ကားပေး Audio ကို Android 7.1.1 စနစ်, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Fiat Bravo မော်တော်ကားပေး Audio ကို Android 7.1.1 စနစ်က
Fiat Doblo 2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ
Fiat Doblo 2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားအသံ ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ကြ,...
တရုတ်နိုင်ငံ Fiat က Android ကား DVD ပေးသွင်း
1.Fiat အန်းဒရွိုက်ကား DVD တစ်ခုတည်း din ကားတစ်စီး DVD player ဖြစ်ပါတယ်, Full HD ကို 1920X1080P ကိုထောကျပံ့: DAT, MPG, MPEG, VOB, MP4, MOV, AVI, DVD ကိုဗီဒီယို, ASF, WMV, MKV, TS, RM, အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုထောကျပံ့ RMVB, ဒီလို H.264, Xvid, MPEG2, MPEG4, VC ကို-1, WMV9, MPEG1, H.263, DivX ဗီဒီယို coding ကို formats ။ ဘလူးတုသ်: အ panel ကိုအပေါ်တစ်ဦး built-in မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူလာကြပြင်ပ micrphone ထောက်ခံပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုဘလူးတုသ်က MP3 player ကိုအင်္ဂါရပ်, အင်္ဂါရပ်များနှင့်ခေါ်ဆိုသူ၏နာမကိုအမှီ display ကိုမျှဝေဘလူးတုသ်အဆက်အသွယ်။ Apple က Samsung, HTC, Sony ကစတာတွေကနေစမတ်ဖုန်းအပါအဝင်ဘလူးတုသ် 2.0 သို့မဟုတ်အထက်နှင့်အတူ device ကို, ဘလူးတုသ်အသံ output ကိုထောက်ပံ့သောစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့သာလိုက်ဖက် MP3 ကိုပြန်ဖွင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။ ပံ့ပိုးမှုအရှိဆုံးဘလူးတုသ် ELM 327 ။
သတင်းအချက်အလက်နိုင်ရန်အတွက် 2. Fiat က Android 5.1 ကား DVD ပြသနိုင်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်, မျက်နှာပြင်စက်ကိုပိုပြီးအရည်စေရန်စက်တင်ဆောင်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အသိဉာဏ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ကိုလည်းပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution ရှိပြီးယင်းနှင့်အတူပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သကဲ့သို့ဝယ်ယူ, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မဆက်ဆံနိုင်ပါရှေ့တော်၌ထိုမော်ဒယ်များပေါ် မူတည်. အသုံးပြုသူ, အညွှန်းများ၏လျှောက်လွှာကိုအထူး features တွေနှင့်အတူလည်းကွဲပြားခြားနားသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောကားတစ်စီး DVD player ဖြစ်ပါတယ်။
3.You အဆိုပါဒီဗီဒီ CANBUS နှင့်အတူရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားလျှင် link.You စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုခလုတ်အားဖြင့်ကားကိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားထိန်းချုပ်နိုင်သည်မှန်နှင့်အတူ Fiat က Android 4.4 ကား DVD ထဲကနေကြိုးမဲ့သီချင်းဖွင့်ခံစားနိုင်။ အပြင်သင်သည်လည်းထိုသူတို့ CANBUS မပါဘဲကားစတီရီယိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Fiat က Android ကား DVD Fiat Linea အန်းဒရွိုက်ကား DVD Fiat က Android 5.1 ကား DVD Fiat က Android 4.4 ကား DVD BMW က Android ကား DVD